Kutheni Ngumphefumlo waseCalifornia? -Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Malunga neminyaka emithandathu kamva, yaqala indoda ngokuzwakalayo ukuva ilizwi likaYesu (ebizwa ngokuba "ziindawo"). Wayengadibani neCatechesis okanye ukuqonda kweNkolo yamaKatolika, ngoko ke izwi likaYesu lamothusa laza lamlungiselela. Nangona amanye amazwi eNkosi eyisilumkiso, walichaza igama likaYesu njengaxa lihleli lihle kwaye limile. Uye wafumana nokhenketho oluvela eSt Pio nakwiindawo ezivela eSt Thérèse de Lisieux, uSt. Catherine waseSiena, uSt. Michael iNgilosi enkulu kunye nenqwaba yeendawo ezivela kwiLady yethu xa yayiphambi kweSakramente Esikelelekileyo. Emva kokudlulisela iminyaka emibini yemiyalezo kunye neemfihlo (eyaziwa kuphela yile ndoda kwaye yabhengezwa kwixesha elizayo elaziwa yiNkosi kuphela) iindawo eziye zayekwa. Wamxelela ke umntu lowo, "Ndiyayeka ukuthetha nawe ngoku, kodwa uMama wam uyakuqhubeka ekhokela."
Esi sibini saziva sibizelwe ukuba siqale indawo yokubhiyozela iMarian Movement yaBabingeleli apho bayokucamngca ngemiyalezo yeLady yethu ukuya	Fr. UStefano Gobbi . Kwakuyiminyaka emibini kula maqula kwakha kwenzeka la mazwi kaYesu: Inenekazi lethu laqala ukumkhokela, kodwa ngendlela ebalaseleyo. Ngexesha lokuhlanjwa kwemilambo, kwaye ngamanye amaxesha, le ndoda yayiya kubona "emoyeni" phambi kwakhe amanani emiyalezo evela kwinto ebizwa ngokuba "Ibhuku eliluhlaza,msgstr "Ukuqokelelwa kwezityhilelo ezanikezelwa liNkosikazi yethu	Fr. UStefano Gobbi , "KuBabingeleli boonyana beNtombazana eNye.
Bobabini indoda nomfazi babandezeleka kakhulu ngenxa yobulungiseleli babo, kodwa bahlala beyinikela eNkosini ukusindiswa kwemiphefumlo. Kuyaphawuleka ukuba yenziwa yile ndoda hayi funda Ibhuku eliluhlaza okwesibhakabhaka ukuza kuthi ga ngoku (njengoko imfundo yakhe inqongophele kwaye enesiphene sokufunda). Kwiminyaka edlulileyo, la manani azenze imizimba yenyama angangqina ngezihlandlo ezininzi incoko ezithandekayo ezenzakalweni zazo, kwaye namhlanje, iziganeko ezenzeka kwihlabathi liphela. Fr. Imiyalezo kaGobbi ayizange isilele kodwa ngoku bafumana ukuzaliseka kwabo ngexesha lexesha lokwenyani.
Imiyalezo evela kuMphefumlo waseCalifornian
Umphefumlo waseCalifornian-Umyalezo wokugqibela
ukuvuma, Inceba kaThixo, emnyango, Isikhanyiso seSazela, Inceba, ulwandlalo, guquka, isilumkiso
Umphefumlo waseCalifornia-uMlamli woBabalo
Ndiyindlela eya Ndlela.
Umama obusisiweyo, red-redrix, ukungcwaliswa, thintelo, uMariya, Mediatrix, ukuba ngumama, intombi
Umphefumlo weCalifornia-Umda weziganeko eziNtlungu
Hlanganisa emkhosini wam.
ubuKatolika, icawa, ukungcwaliswa, intliziyo, engaqhelekanga, ukukhulelwa okungenabala, zokuhlanjululwa, themba
Umphefumlo waseCalifornia-Ilixa laMandla eengelosi
Bakhokela bonke abantwana bam kwidabi lokugqibela.
iingelosi, ngelosi, Imfazwe, gabriel, Michael, ukhuselo, Raphael, Imbandezelo
Umphefumlo waseCalifornia - Sukulahlekiswa
... ngamagama, imifanekiso kunye nobubi bamaxesha akho.
ukuphoxeka, Diabolical, Intliziyo Enganyanzelekanga, UYesu, buxoki, uMariya, zoonografi, ukukhohlisa
Umphefumlo WaseCalifornia - UThixo Unawe!
Ndikulungiselela uLawulo lwaKhe loThando noXolo.
icawa, Bumnyama, Isahluko soxolo, ku khanyisa, busuku, uwuthanda, lawula, Imbandezelo, uloyiso, qaphela, isilumkiso
Umphefumlo waseCalifornia-Umsebenzi endiwuphathisileyo
Yizisa imiphefumlo kufakelo lwentliziyo yam engafezekanga.
umphongolo, isiseko, hla nganisa, Nceda, Intliziyo Enganyanzelekanga, mthandazo, fi kelela, Imbuyekezo, irosari
Umphefumlo waseCalifornia-Amandla esihogo awasayi koyisa
UYesu waseka iBandla laKhe kuPetros.
ubuKatolika, isitulo, icawa, UYesu, peter, iipetros, iliwa, eRoma
Umphefumlo waseCalifornia-Icawe yokubandezeleka
Kungekudala ukusuka kwintlungu yethu, ixesha elitsha ...
icawa, Isahluko soxolo, uwuthanda, zokuhlanjululwa, uvuko, buhlungu, nde zeleka
Umphefumlo waseCalifornia-Imitha yoBuqaqawuli bam
Matshi 26, 2021
Yandisa imitha yokholo ngeli xesha lokreqo olukhulu.
Uwexuko, icawa, Isahluko soxolo, ukholo, iGetsemane, intliziyo, engaqhelekanga, uwuthanda, mthandazo, Imisebe, themba
Umphefumlo waseCalifornia-INkosi iyeza
Yiza kunye noMama wakho ukudibana naye.
Isahluko soxolo, Intliziyo Enganyanzelekanga, UYesu, uMariya, ulwandlalo, Ukuphumelela
Umphefumlo waseCalifornia-Ixesha leTyala eliKhulu
Ixesha lokulingwa lifikile ...
ukuvuma, Intliziyo Enganyanzelekanga, Inimba, uMariya, ukhuselo, yokufihla, umthendeleko, Imbandezelo
Umphefumlo waseCalifornia-Mkhuseli kunye noMkhuseli
... kwiziganeko ezibuhlungu ezikulindeleyo.
okhuselayo, ukhuselo, zokuhlanjululwa, yokufihla, st. UJoseph, uloyiko lweedemon, Imbandezelo
Matshi 8, 2021
ukuphazamiseka, iinyikima, ukholo, ikhefu, grid, amandla, mthandazo, ukuthuthumela, yelanga, iteknoloji, uvavanyo, trial, Imbandezelo, themba
Umphefumlo waseCalifornia-Amaxesha Am Afikile
Amaxesha endixele kwangaphambili kuFatima afikile.
Akita, ukubonakala, Fatima, iGetsemane, uwuthanda, Ntshutshiso, Imbandezelo
Umphefumlo waseCalifornia-Ilixa lobumnyama
Matshi 5, 2021
Ingaba umanga uNyana woMntu ngokumanga na?
Uwexuko, ukungcatsha, oobhishophu, abefundisi, Bumnyama, yure, ijaji, ababingeleli, intsalela, Ukuphumelela
Umphefumlo waseCalifornia-Ngamandla AbaNcinci
Ndizoyisa amandla amakhulu kaSathana.
Umphefumlo waseCalifornia - Ndiphe ezi ntyatyambo
Ndifuna ukuba khona kwam njengomama.
izimbali, ukungcwaliswa, ukucamngca, iintyatyambo, Intliziyo Enganyanzelekanga, uMariya, Umama, mthandazo, cwaka, Ukuphumelela
Umphefumlo WaseCalifornia - Kutheni Ndisalila?
Akita, isohlwayo, umlilo, Japhan, uMariya, Umama, zokuhlanjululwa, intsalela, guquka, iinyembezi
Umphefumlo waseCalifornia-Ixesha lokulingwa lifikile
... ngenxa yobulukhuni beentliziyo.
Akita, ubuKatolika, isohlwayo, icawa, umlilo, Intliziyo Enganyanzelekanga, Inenekazi lethu, zokuhlanjululwa, yokufihla, isilumkiso
Umphefumlo waseCalifornia -Ienyembezi Zam
Umzuzu wesohlwayo ufikile.
isohlwayo, icawa, Inceba kaThixo, Fatima, lungisa, uMariya, Umama, zokuhlanjululwa, isono, umfanekiso, iinyembezi, ndilila
Umphefumlo waseCalifornia-I-Anchor yoSindiso
Umchasi-Kristu uza kuphakama ngamandla.
anchor, Umchasi-Kristu, ICoronavirus, I-Covid-19, isifo, bhubhane, isihogo, uMariya, bhubhane, lokugonya
Umphefumlo waseCalifornia-Sukuphinda Wone
Eli lixesha lobulungisa nenceba.
isohlwayo, inyikima, ukholo, Intliziyo Enganyanzelekanga, lungisa, uMariya, Inceba, Umama, guquka, isono, intombi, mlilo
Umphefumlo waseCalifornia-Yonke into ityhiliwe
Februwari 14, 2021
Lungiselela ukuzalwa kukaYesu kwesibini.
kuzalwa, Krisimesi, icawa, Entlango, Iintlanga, i-herod, iijew, sebenzi, uwuthanda, abantu, st. UJoseph
Umphefumlo waseCalifornia-Entliziyweni yeCawa
... uloyiso sele luqalisile.
Isahluko soxolo, Intliziyo Enganyanzelekanga, papa, ububingeleli, ababingeleli, Ukuphumelela
Umphefumlo waseCalifornia-Uphawu lwerhamncwa
Februwari 1, 2021
Isayinwe, endaweni yoko, ngotywina lwam lomama.
Umchasi-Kristu, apocalypse, lwanyana, ebunzi, gobbi, ngesandla, john, uphawu, ukwambula
... ukuze iimfihlo zokugqibela zityhilwe.
Umchasi-Kristu, icawa, ukungcwaliswa, Isahluko soxolo, Fatima, Ntshutshiso, papa, zokuhlanjululwa, Rhashiya, okufihliweyo, Ukuphumelela
Umphefumlo waseCalifornia -Ukukhathala kweCawa
Zilungiseleleni ukunyuka iKalvari.
icawa, ukufa, ULWESIHLANU olungileyo, UYesu, ukholo, uMariya, Umama, uwuthanda, ububingeleli, uvuko, nde zeleka, Ukuphumelela
Umphefumlo waseCalifornia-Yiba Nentembelo!
Kwintliziyo yam engafezekanga, uya konwaba.
minyaka, ukuthanda kukaThixo, Isahluko soxolo, kuzaliseka, Intliziyo Enganyanzelekanga, umbuso, uMariya, iplani, Ukuphumelela
Umphefumlo waseCalifornia - Ingelosi yeSibetho sokuqala
Iingelosi zithunyelwa ngezibetho zazo ...
ngelosi, isohlwayo, ukufa, inyama, ukungahlambuluki, lungisa, bhubhane, isibetho, zoonografi, zokuhlanjululwa, isini, isono, Imbandezelo
Umphefumlo weCalifornia-Ubungozi obukusongelayo
Umngcipheko omkhulu kukulukuhla kwehlabathi.
Umama obusisiweyo, ukuxakeka, ukuvuma, ukusasaza, ukuphazamiseka, ukholo, impilo, uMariya, bhubhane, mthandazo, xo laniso, kugula
Umphefumlo waseCalifornia-Intlungu yakho elusizi
Ukulahlwa kokwaliwa ngabahlobo.
icawa, Intliziyo Enganyanzelekanga, thintelo, uMariya, uwuthanda, ukohlwaya, Imbuyekezo, nde zeleka, umphefumlo wexhoba
Umphefumlo waseCalifornia-iSchism iza kuza
Oktobha 16, 2020
Inceba iya kuphumelela.
Umchasi-Kristu, Uwexuko, isohlwayo, daniel, umprofeti wobuxoki, isiprofetho, zokuhlanjululwa, inkcaso
Umphefumlo waseCalifornia-Ulawulo lwakhe luza
Sele sele emasangweni.
Isahluko soxolo, gobbi, Intliziyo Enganyanzelekanga, UYesu, umbuso, lawula, uStefano, Ukuphumelela
Umphefumlo waseCalifornia- Yonke into emalunga nokuFezekiswa
Ukukhokelela kwiPentekoste entsha.
Umphefumlo waseCalifornia-Intliziyo yam iyopha
Ubuntu abuyamkelanga umnxeba wam
kuphuma, incwadi eluhlaza okwesibhakabhaka, fr. uStefano gobbi, Intliziyo Enganyanzelekanga, Umama, ihlatyiwe, buhlungu
Umphefumlo weCalifornia-Uthembekile, ukhawulezile kwaye uyathobela
Agasti 29, 2020
Emva koko uKrestu uya kubuya ukuze alubuyisele uLawulo lwaKho loThando.
Isahluko soxolo, ukuthembeka, thobela, papa, ububingeleli, ababingeleli, Ukuphumelela
Umphefumlo waseCalifornia-Iingozi ezisongelayo
Umngcipheko wokukrolwa kukutsalwa lihlabathi.
ntembelo, ukudimazeka, ivumba, mthandazo, irosari, iisakramente, silingo
Umphefumlo waseCalifornia-Yiba nokuzithemba kuMama wakho
Agasti 12, 2020
Yiba ngamangqina okholo kula maxesha wowexuko olukhulu.
ntembelo, uMariya, mthandazo, ububingeleli, ababingeleli, irosari, themba
Umphefumlo waseCalifornia-Impendulo yakho
Ixesha lokuya ekulweni lifikile.
ntembelo, gobbi, mthandazo, ababingeleli, impendulo, uStefano
Umphefumlo waseCalifornia-Ulawulo oluzayo lukaKristu
Njengoko isezulwini, iya kuba njalo nasemhlabeni.
Kristu, Isahluko soxolo, Umthendeleko, lawula, Ukuphumelela
Umphefumlo waseCalifornia-uMariya uphawula abantwana baKhe
Imfazwe, ukungcwaliswa, dragon, uphawu, inkosikazi
Umphefumlo waseCalifornia - Jonga phezulu eParadesi
Ubuntu buhamba kwindlela yemvukelo.
Umphefumlo waseCalifornia-Umgibe wokuDimazeka
Phendula ngomthandazo oqhubekayo kunye nokomelela.
Uwexuko, Intliziyo Enganyanzelekanga, Ntshutshiso, papa
Umphefumlo waseCalifornia -Isihogo asizukunqoba
Umsebenzi awunikwe nguPeter unikezelwa kwabo bangena ezihlangwini zakhe.
Umphefumlo waseCalifornia-ngoMgqibelo weNtlungu yam enkulu
Namhlanje, ndikuqokelela kwiingalo zikaMama ...
californi, UFr. UGobbi, Inenekazi lethu, Isabatha, Iintlungu
Umphefumlo waseCalifornia-Ilixa leNtsizi yam enkulu
Icawe yenziwe njengo-Nyana wam, ekuhlaleni yedwa kunye nokushiywa ...
Umphefumlo waseCalifornia-Amaxesha eMfazwe
Eli lidabi lam elikhulu! Yintoni oyibonayo kunye nento oyiphilelayo ngeefom zenxalenye yesicwangciso sam.
Ndivula iNcwadi etywiniweyo
Ndokuvulela incwadi etywiniweyo, ukuze iimfihlakalo eziphakathi kwayo zibonakale.
UFr. UStefano Gobbi-Ndabelana ngeeYure zeNtlungu
Matshi 27, 2020
Nam ndabelana nawe ekuhlaleni ezi yure zentlungu enkulu.
← Kutheni uFr. UMichel Rodrigue? …